Waxaan soo kaban karto sawiro ka Eye-Fi SD Card?
Hab-Eye-Fi SD Card Data Recovery in 3 Talaabooyinka
1 Waxaan soo kaban karto sawiro ka Eye-Fi SD Card?
Waxaan leeyahay ka Canon 60D camera digital. Waxaan u isticmaali kaarka 4GB Eye-Fi Pro X2 xusuusta ku yaal. Shalay markii aan qaaday sawiro la camera digital, waxaan ka helay fariin "Baadi kaadhka xusuusta" ah. Markaas waxaan isku dayay xira aan card SD Eye-Fi la computer, waxaa la ii sheegay baahida kaarka in la formatted. Laakiin anigu ma aan samayn kartaa in. Marka aan u formatted, oo dhan photos kaydiyaa it on laga saaro lahaa. Ma suurto gal inaad i soo kabsado sawiro ka card SD Eye-Fi?
Card SD Eye-Fi waa qalab gaar ah oo lagu kaydiyo kuu ogolaanaya inaad ku kaydiso xogta iyo sidoo kale iibsiga ku kaydsan files si aad u computer la Wi-Fi. In kastoo ay tahay mid aad u sahlan, files waxaa weli lagu lumin karaa sababtoo ah baadi card, tirtirka, formatting card iyo xataa qalliin aan habboonayn. Runta waxa ay tahay, sawiro aad weli ku jira kaarka SD Eye-FI inta aad aan isticmaal kasta waxaa ka mid ah. Sidaas, waxaad caawin kartaa waxoogaa yar oo raadi Eye-Fi soo kabasho dhinac saddexaad card SD xogta ee Internet-ka si ay kuu caawiyaan.
Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac yahay xalkaaga aad kaamil ah inuu ka soo kabsado Eye-Fi xogta card SD. Faylal laga badiyay sababo sida tirtirka, Baadi card, formatting card si fudud baxey karaa barnaamijka cajiibka ah. Waxaad awoodi doontaa in ay dib u hanato sawirada lumay, videos, files audio iyo ka badan oo ka kaarka SD Eye-Fi in hab fudud oo khatar la'aan la qalab this.
2 Hab-Eye-Fi SD Card Data Recovery in 3 Talaabooyinka
Waxaan soo kabsan karno Eye-Fi xogta card SD la Windows version of barnaamijkan. Users Mac raaci karaan howlaha la mid ah la version Mac in la sameeyo dib u soo kabashada.
Tallaabada 1 hab kabashada Select inuu ku soo bilowdo Eye-Fi SD kabashada xogta card
Halkan, inuu ka soo kabsado tirtiray ama formatted files ka kaarka SD Eye-Fi, waxaad dooran kartaa "File lumay Recovery" mode sida isku day ah oo hore.
Fiiro gaar ah: Fadlan jir ahaan xirmaan kaarka SD Eye-Fi la your computer iyo in la hubiyo in loo aqoonsan karo sida drive ah.
Tallaabada 2 baarista card SD Eye-Fi si aad u ogaato faylasha lumay
Hadda waxaad dooran doonaa kaarka SD Eye-Fi oo guji "Start" button furmo si ay u bilaabaan baar files lumay it on.
Si aad u soo kabsado xogta ka kaarka formatted Eye-Fi SD, waxaad dooran kartaa "Enable Deep Scan" doorasho uu furmo.
Tallaabada 3 Ladnaansho sawiro ka card SD Eye-Fi
Ugu dambeyntii, dhammaan faylasha recoverable ku qoran kaarka SD Eye-Fi lagu soo bandhigi doonaa furmo suuqa ka dib markii baar. Waxaad ku eegaan kartaa sawirro si aad u hubiso sida badan oo sawiro lumay noqon kartaa dib u soo kabashada.
Markaas kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan sawiro ama faylasha kale aad rabto in aad soo kabsadaan oo guji "Ladnaansho" badhanka si ay u badbaadin on your computer.
Fiiro gaar ah: Ha badbaadiyo files soo kabsaday intii lagu jiray soo kabashada dib ugu kaarka SD Eye-Fi.
> Resource > Ladnaansho > Siduu u Eye-Fi SD Card Data Recovery